YH ဟိုက်ဒရောလစ် - တရုတ် Hydraulic Hose Fittings, Hydraulic Ferrules, Hydraulic စက်များပေးသွင်း
ရေပိုက် Crimping စက်များ
ဟိုက်ဒရောလစ်အနားကွပ် 87312 SAE J516 အဝတ်အစားအစမ်းဝတ်ထုတ်လုပ်သူဟိုက်ဒရောလစ်ဆီလျြော
ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့ပညာရှင်များ၏ခိုင်ခံ့သောအကူအညီများနှင့်အတူကျနော်တို့ Hydraulic အနားကွပ် 87312 SAE J516 အဝတ်အစားအစမ်းဝတ်ထုတ်လုပ်သူဟိုက်ဒရောလစ်ဆီလျြောတစ်ခုကျယ်ပြန့်အစအဆုံးအကုန်ထုတ်လုပ်နိုင်ကြသည်။ ဒါဟာအဘက်ဘက်မှအထောက်အကူကျွန်တော်တို့ရဲ့အရည်အချင်းပြည့်မီနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများ၏နိုင်ခဲ့လမ်းညွှန်မှုအောက်၌သာလွန်အရည်အသွေးကိုကုန်ကြမ်းကို အသုံးပြု. ဖြတ်တောက်ခြင်း-အစွန်းနည်းစနစ်၏အကူအညီနှင့်အတူထုတ်လုပ်နေသည်။ ပစ္စည်း: ကာဗွန်သံမဏိ Technical: အတုအမျိုးအစား: စုံတွဲ, အနားကွပ်ရာဌာန ...
ကာဗွန်သံမဏိ JIC ဟိုက်ဒရောလစ် fittings ဖြောင့်ဟိုက်ဒရောလစ်ရေပိုက် jic အမျိုးသမီး fittings ပေါင်းလိုက်သော
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖောက်သည် JIC ဟိုက်ဒရောလစ် fittings ဖြောင့်ဟိုက်ဒရောလစ်ရေပိုက် jic အမျိုးသမီး fittings ပေါင်းလိုက်သောကာဗွန်သံမဏိကိုပူဇော်သက္ကာဘို့အတွက်အနုပညာကျွမ်းကျင်ခဲ့သည်။ ကာဗွန်သံမဏိ JIC ဟိုက်ဒရောလစ် fittings ပေါင်းလိုက်သောဖြောင့်ဟိုက်ဒရောလစ်ရေပိုက် jic အမျိုးသမီး fittings ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်လိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီဒီဇိုင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးလျက်ရှိသည်။ ပူဇော်သက္ကာကိုအကွာအဝေးကွဲပြားခြားနားအရွယ်အစားအတွက်လူတို့အားဆင်ယင်သည်ဒီဇိုင်းများ, ပုံစံများနှင့် ...
ဟိုက်ဒရောလစ်ရေပိုက် fittings / ဟိုက်ဒရောလစ်ရေပိုက် fittings ferrule
ကျနော်တို့အလွန်အမင်းဟိုက်ဒရောလစ်ရေပိုက် fittings / ဟိုက်ဒရောလစ်ရေပိုက် fittings ferrule ၏အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးအကွာအဝေးကိုပူဇော်သက္ကာဘို့အတွက်စေ့စပ်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဗွေဆော်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါထောက်ပံ့ပေးဟိုက်ဒရောလစ်ရေပိုက် fittings / ဟိုက်ဒရောလစ်ရေပိုက် fittings ferrule တိကျစွာကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးကုန်ကြမ်းကို အသုံးပြု. ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့်အဆင့်မြင့်နည်းပညာဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ဟိုက်ဒရောလစ်ရေပိုက် fittings / ဟိုက်ဒရောလစ်ရေပိုက် fittings ferrule အလွန်အမင်းတန်ဖိုးထားကြသည် ...
အထီး ORFS ပြားချပ်ချပ်အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင် Hydraulic Hose Fittings
ကျနော်တို့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်စေ့စပ်နှင့်အမျိုးသား ORFS ပြားချပ်ချပ်အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင် Hydraulic Hose Fittings တစ်ကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်းထောက်ပံ့သောဉီးအဖွဲ့အစည်းကိုဖြစ်ကြသည်။ ထိုထုတ်ကုန်စျေးကွက်၏ relabel နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောရောင်းချသူထံမှရင်းမြစ်ထားတဲ့ကြောင်းအကောင်းဆုံးသောအရည်အသွေးကိုပစ္စည်းကို အသုံးပြု. ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။ ဖောက်သည်များ၏မတူကွဲပြားသောလိုအပ်ချက်များဖြည့်ဆည်းဖို့ကျနော်တို့ကဤအမျိုးသား ORFS ပြားချပ်ချပ်အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင် Hydraulic Hose ပူဇော် ...
70011 / 72011hydraulic banjo လျောက်ပတ်, bsp / မက်ထရစ် banjo ဟိုက်ဒရောလစ် fittings နှင့် connectors
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖိုးတန်ဖောက်သည် banjo ဟိုက်ဒရောလစ် fittings နှင့် connectors မက်ထရစ် / bsp လျောက်ပတ်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးကို 70011 / 72011hydraulic banjo ၏ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေး, ကိုဆက်ကပ်။ သူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်များနှင့်စံနမူနာပုံစံဒီဇိုင်းရှိနေသော်ငြားလည်းဤ 70011 / 72011hydraulic banjo လျောက်ပတ်, မက်ထရစ် / bsp banjo ဟိုက်ဒရောလစ် fittings နှင့် connectors အလွန်အမင်းအမျိုးမျိုးသောစက်မှု application များအတွက်တောင်းဆိုနေကြသည်။ ကမ်းလှမ်းခဲ့သည် 70011 / 72011hydraulic banjo လျောက်ပတ်, မက်ထရစ် / bsp banjo ဟိုက်ဒရောလစ် fittings နှင့် connectors ဟာအတွင်းကိုအပ်ကြသည် ...
YH ဟိုက်ဒရောလစ်အမျိုးသမီး 90 Hydraulic Hose Ferrule အဝတ်အစားအစမ်းဝတ်
ကျွန်ုပ်တို့၏ YH ဟိုက်ဒရောလစ်အမျိုးသမီး 90 Hydraulic Hose Ferrule အဝတ်အစားအစမ်းဝတ်တဲ့ကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်းထောက်ပံ့ထားတဲ့လူအများကလေးစားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန် High-grade ကိုပစ္စည်းသုံးပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ State-Of-The-Art ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံမှာဖွံ့ဖြိုးပြီးနေကြတယ်။ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အသုံးပြုသောပစ္စည်းစျေးကွက်၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောရောင်းချသူထံမှရင်းမြစ်ထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပွငျ, ငါတို့အမျိုးမျိုးသောတွင်ဤ YH ဟိုက်ဒရောလစ်အမျိုးသမီး 90 Hydraulic Hose Ferrule အဝတ်အစားအစမ်းဝတ်ပူဇော် ...
316 သံမဏိအမျိုးသား Metric Din အကြီးစားကျစ် Hose Fittings
ကျနော်တို့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်စေ့စပ်နှင့် 316 သံမဏိအမျိုးသား Metric Din အကြီးစားကျစ် Hose Fittings တစ်ကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်းထောက်ပံ့သောဉီးအဖွဲ့အစည်းကိုဖြစ်ကြသည်။ ထိုထုတ်ကုန်စျေးကွက်၏ relabel နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောရောင်းချသူထံမှရင်းမြစ်ထားတဲ့ကြောင်းအကောင်းဆုံးသောအရည်အသွေးကိုပစ္စည်းကို အသုံးပြု. ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။ ဖောက်သည်များ၏မတူကွဲပြားသောလိုအပ်ချက်များဖြည့်ဆည်းဖို့ကျနော်တို့ကဤ 316 သံမဏိအမျိုးသား Metric ပူဇော် ...
ကာဗွန်သံမဏိ Adapter က jic Hydraulic ရေပိုက်လျောက်ပတ်
စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ထူးဆန်းသောအနေအထားထွင်းနိုင်ရန်အတွက်ကျနော်တို့ကိရိယာသဘောသဘာဝအတွက်ဟန်ချက်ညီအောင်ထိန်းနှင့်လျှပ်စစ်မဟာမိတ်ဖွဲ့များတွင်အသုံးပြုကြသည်ကာဗွန်သံမဏိ Adapter က jic Hydraulic ရေပိုက်လျောက်ပတ်၏ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးကိုဆက်ကပ်။ ကျနော်တို့တစျခုလုံးကိုကာဗွန်သံမဏိ Adapter ကသတ်မှတ်အရည်အသွေးအနှုန်းအဖြစ်သူတို့ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သူစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်လက်မှတ်ရောင်းချသူထံမှ jic Hydraulic ရေပိုက်လျောက်ပတ်အကွာအဝေး source ...
ဟိုက်ဒရောလစ် 45 ဒီဂရီ BSP အမျိုးသမီး Flat ထိုင်ခုံဆီလျြော
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖိုးတန်ဖောက်သည် 45 ဒီဂရီ BSP အမျိုးသမီး Flat ထိုင်ခုံဆီလျြောပရီမီယံရဲ့အရည်အသွေး Hydraulic ၏ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးကိုဆက်ကပ်။ သူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်, ချေးဖို့ခုခံ, ရှည်လျား functional ဖြစ်စေအသက်နှင့်အပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိသောဒီဇိုင်းကိုအလွန်အမင်းဈေးကွက်ထဲမှာတောင်းဆိုသည်ဤ Hydraulic အဝတ်အစားအစမ်းဝတ် 45 ဒီဂရီ BSP အမျိုးသမီး Flat ထိုင်ခုံပါစေ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျယ်ပြန့်ဖြန့်ဖြူးကွန်ယက်, ငါတို့သည်ဤ Hydraulic 45 ဒီဂရီ BSP လျောက်ပတ်မကယ်မလွှတ် ...
ဇင့်ကို double connector ကိုဟိုက်ဒရောလစ်ဆီလျြောကာဗွန်သံမဏိချထားတဲ့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့ပညာရှင်များ၏ခိုင်ခံ့သောအကူအညီများနှင့်အတူကျနော်တို့ဇင့်တစ်ခုကျယ်ပြန့်အစအဆုံးအကုန်ထုတ်လုပ်နိုင်ကြသည်ကို double connector ကိုဟိုက်ဒရောလစ်ဆီလျြောကာဗွန်သံမဏိချထားတဲ့။ ဒါဟာအဘက်ဘက်မှအထောက်အကူကျွန်တော်တို့ရဲ့အရည်အချင်းပြည့်မီနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများ၏နိုင်ခဲ့လမ်းညွှန်မှုအောက်၌သာလွန်အရည်အသွေးကိုကုန်ကြမ်းကို အသုံးပြု. ဖြတ်တောက်ခြင်း-အစွန်းနည်းစနစ်၏အကူအညီနှင့်အတူထုတ်လုပ်နေသည်။ အမျိုးအစား: Fittings မော်ဒယ်အရေအတွက်: P90011 အမှတ်တံဆိပ်အမည်: YH ဟိုက်ဒရောလစ်ရာဌာန ...
ကျနော်တို့ကာဗွန်သံမဏိအရည်အသွေးမြင့်မားဟိုက်ဒရောလစ်ရေပိုက်နှင့်ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုအရည်အသွေးမြင့်မားခင်းကျင်းပေးခြင်းအားဖြင့်ဈေးကွက်ထဲမှာတစ်ဦးကွဲပြားခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲနေသောအနေအထားမှတ်သားခဲ့ကြသည်။ သံမဏိအရည်အသွေးမြင့်မားဟိုက်ဒရောလစ်ရေပိုက်နှင့်ဆက်သွယ်မှုရောင်းချသူမှာထုတ်လုပ်သည်ကိုကမ်းလှမ်းကာဗွန်စက်မှုလုပ်ငန်းစံချိန်စံညွှန်းနှင့်အတူလိုက်နာမှုအတွက်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးမြင့်ကုန်ကြမ်းများနှင့်အဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံးပြီးအဆုံးသတ်ရတတ်ပါတယ်။ ထို့အပွငျ, ဒီကာဗွန်သံမဏိအရည်အသွေးမြင့် ...
90 က de SAE အနားကွပ် 3000 PSI, လျောက်ပတ်ဟိုက်ဒရောလစ်ရေပိုက်, ပြွန်လျောက်ပတ်
ယင်းကျယ်ပြန့်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအပေါ်ပြုကြရန်တွန်းအားပေးခြင်းများ, ငါတို့ထူးခြားတဲ့ 90 က de SAE အနားကွပ် 3000 PSI, လျောက်ပတ်ဟိုက်ဒရောလစ်ရေပိုက်လျောက်ပတ်, ပြွန်ဘွားနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ ထိုထုတ်ကုန် CNC နည်းပညာထည့်သွင်း High-grade ကိုလူမီနီယံ, ကြေးဝါနှင့်သံမဏိ၏အသုံးချနေကထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။ အဆိုပါကမ်းလှမ်းခဲ့သည် 90 က de SAE အနားကွပ် 3000 PSI, လျောက်ပတ်ဟိုက်ဒရောလစ်ရေပိုက်, ပြွန်သငျ့ရှိပါတယ် ...
အမျိုးသမီး JIC သံမဏိဟိုက်ဒရောလစ် Hose Fittings
ကျနော်တို့အမျိုးသမီး JIC သံမဏိဟိုက်ဒရောလစ် Hose Fittings ထိုသို့သောစသည်တို့ကိုမော်တော်ယာဉ်, ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့အဖြစ်အမျိုးမျိုးသောလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုကြသည်ကျနော်တို့ Din 2353 / က ISO / SAE နှုန်းအဖြစ် Fittings ထုတ်လုပ်နေကြတယ်, အမျိုးသမီး JIC သံမဏိဟိုက်ဒရောလစ် Hose Fittings ၏ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကိုထုတ်လုပ်နေကြသည် / စံချိန်စံညွှန်းများ IS ကျနော်တို့ကိုလည်းဖောက်သည်လိုအပ်ချက်နှုန်းအဖြစ်စိတ်ကြိုက်အမျိုးသမီး JIC သံမဏိဟိုက်ဒရောလစ် Hose Fittings ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။ ပစ္စည်း: သံမဏိ ...
ဟိုက်ဒရောလစ် Adapter က၏အရည်အသွေးကောင်းသငျ့လယ်ထွန်စက်အပိုပစ္စည်း banjo
ကျနော်တို့အရောင်းအဝယ်ဖြစ်, တင်ပို့, ထောက်ပံ့, ကုန်ထုတ်လုပ်ရေး၏လယ်ပြင်တွင်ရေတွင်းလူသိများသည့်ကုမ္ပဏီများအကြားရှိပါတယ်။ ဟိုက်ဒရောလစ် Adapter ကကောင်းအရည်အသွေး Wholesaling နှင့်လက်လီအရောင်းလယ်ထွန်စက်အပိုပစ္စည်းလျောက်ပတ် banjo ။ ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်သူများ၏ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင်စမ်းသပ်ပြီးအရည်အသွေးကိုဖြစ်ကြသည်။ နောက်ထပ်ထိုအမြင့်မားတဲ့တာရှည်ခံသောစွမ်းဆောင်ရည်များနှင့်ထိရောက်သောအလုပ်တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိရှိသည်။ ဟိုက်ဒရောလစ် Adapter က banjo ၏ဤအရည်အသွေးကောင်းရန်အပြင် ...
SS304 ဆုံလည် One Piece အမျိုးအစား Hydraulic Hose အဝတ်အစားအစမ်းဝတ်
ကျနော်တို့အဝတ်အစားအစမ်းဝတ်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးကို SS304 ဆုံလည် One Piece အမျိုးအစား Hydraulic Hose ၏ကျော်ကြားပေးတဝတည်းဖြစ်ကြ၏။ လျောက်ပတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ်းလှမ်းခဲ့သည် SS304 ဆုံလည် One Piece အမျိုးအစား Hydraulic Hose ဆိုးရွားသောအခြေအနေများ, ကြံ့ခိုင်ဆောက်လုပ်ရေး, Ergonomics ဒီဇိုင်း, ခိုင်မာ, ကြာကြာကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းဘဝနှင့်သာလွန် finish ကိုခံနိုင်ရည်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်လူသိများကြပါတယ်။ ကျနော်တို့အတွက် Hydraulic Hose အဝတ်အစားအစမ်းဝတ်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးကို SS304 ဆုံလည် One Piece အမျိုးအစားကိုထုတ်လုပ် ...
JIC 45 ဒီဂရီ Hydraulic Hose Fittings အမျိုးသမီး Fittings 26741
ကျနော်တို့ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း, တင်ပို့, wholesaling နှင့် JIC 45 ဒီဂရီ Hydraulic Hose Fittings အမျိုးသမီး Fittings 26741 ထောက်ပံ့အတွက်စေ့စပ်နေကြတယ်ကြွယ်ဝသောစက်မှုလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနှင့်အတူကျောထောက်နောက်ခံ။ အဆိုပါကမ်းလှမ်းခဲ့သည် JIC 45 ဒီဂရီ Hydraulic Hose Fittings အမျိုးသမီး Fittings 26741 ရွေးချယ်ဖို့ကွဲပြားခြားနားသောသတ်မှတ်ချက်များအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဤသည် JIC 45 ဒီဂရီ Hydraulic Hose Fittings အမျိုးသမီး Fittings 26741 စိတ်တွင်ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းအရည်အသွေးကို-approved အချက်သွင်းအားစုနှင့်အတူထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ် ...
ကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ဖိုး client များအတွက်လျောက်ပတ်ကာဗွန်သံမဏိဟိုက်ဒရောလစ်ရေပိုက်အတွက်မက်ထရစ်အထီးသငျ့ Hydraulic ပူဇော်ဖို့ယုံကြည်စိတ်ချအမည်များတဝတည်းဖြစ်ကြ၏။ ကာဗွန်သံမဏိဟိုက်ဒရောလစ်ရေပိုက်လျောက်ပတ်အတွက်မက်ထရစ်အထီးသငျ့ Hydraulic ၏ထောက်ပံ့အကွာအဝေးတန်းမြင့်အရည်အသွေးမြင့်ကုန်ကြမ်းကနေဖန်ဆင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်။ Hydraulic လျောက်ပတ်ကာဗွန်သံမဏိဟိုက်ဒရောလစ်ရေပိုက်အတွက်မက်ထရစ်အထီးသငျ့ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုကြသည် ...
YH ဟိုက်ဒရောလစ်အမျိုးမျိုးဟိုက်ဒရောလစ်ရေပိုက်လျောက်ပတ် swaged
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ YH ဟိုက်ဒရောလစ်ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့အတွက်အလွန်အမင်းတန်ဖိုးထားသည် client များအားလုံးကိုမျိုးလျောက်ပတ်ဟိုက်ဒရောလစ်ရေပိုက် swaged ။ YH ဟိုက်ဒရောလစ်အမျိုးမျိုးဟိုက်ဒရောလစ်ရေပိုက်လျောက်ပတ်ကျယ်ပြန့်မှုကြောင့်ခိုင်မာတဲ့ဆောက်လုပ်ရေး, ရှည်သောအသက်, ဒုက္ခအခမဲ့အသုံးပြုမှုနှင့်ချေး-ခုခံဖို့, စျေးကွက်အတွက်တောင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ် swaged ။ ပူဇော်သက္ကာကိုအကွာအဝေးကျယ်ပြန့်ပွိုနှင့်ထူးခြားပြောင်မြောက် attribute တွေရှိခြင်းများအတွက် clients များကချီးကျူးသည်။ ဤသည် YH ...
ဟိုက်ဒရောလစ် Hose Adapter ကိုသံမဏိပိုက်အဝတ်အစားအစမ်းဝတ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ဖိုး client များအတွက်လျောက်ပတ် Hydraulic Hose Adapter ကိုသံမဏိပိုက်ပူဇော်ဖို့ယုံကြည်စိတ်ချအမည်များတဝတည်းဖြစ်ကြ၏။ Hydraulic Hose Adapter ကိုသံမဏိပိုက်အဝတ်အစားအစမ်းဝတ်တန်းမြင့်အရည်အသွေးမြင့်ကုန်ကြမ်းကနေဖန်ဆင်းထားသည်၏အကွာအဝေးဖြစ်သည်။ ကမ်းလှမ်းခဲ့သည် Hydraulic Hose Adapter ကိုသံမဏိပိုက်အဝတ်အစားအစမ်းဝတ်ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးသောလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုကြသည်။ ဤရွေ့ကား Hydraulic Hose Adapter ကိုသံမဏိပိုက်အဝတ်အစားအစမ်းဝတ် ...
မြင့်မားသောဖိအားဟိုက်ဒရောလစ်ရေပိုက် fittings က Parker နျ Standard
လက်ရှိစျေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းစောင့်ရှောက်ခြင်းအားဖြင့်ကျနော်တို့က Parker Standard.The က Parker နျ Standard စက်မှုလုပ်ငန်း norms.Our အရည်အသွေးကိုစာမေးပွဲစစ်ဆေးရေးနှင့်အတူလိုက်နာမှုအတွက်စျေးကွက်၏သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းရောင်းချသူထံမှဝယ်ယူနေသည်မြင့်မားသောဖိအားဟိုက်ဒရောလစ်ရေပိုက် fittings ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်မြင့်မားသောဖိအားဟိုက်ဒရောလစ်ရေပိုက် fittings ၏အကောင်းဆုံးအကွာအဝေးကိုပူဇော်သက္ကာဘို့နေကြတယ် မှသကဲ့သို့ကွဲပြားခြားနားသော parameters တွေကိုဆန့်ကျင်စမ်းသပ်မှုဒီမြင့်မားတဲ့ဖိအားဟိုက်ဒရောလစ်ရေပိုက် fittings က Parker နျ Standard ...
YH Hydraulic အကြောင်း
Ningbo YH Hydraulic စက်စက်ရုံ Ningbo, တရုတ်၎င်း၏စက်ရုံနှင့်အတူ 2003 အတွက်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ အနီးဆုံးဆိပ်ကမ်း Ningbo ဆိပ်ကမ်းဖြစ်ပါတယ်။ YH Hydraulic ကိုထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများတဲ့အထူးပြုစက်ရုံဖြစ်ပါသည် ဟိုက်ဒရောလစ်ရေပိုက် fittings, ဟိုက်ဒရောလစ် ferrules, adapter fittings, ဟိုက်ဒရောလစ်ရေပိုက်, ဟိုက်ဒရောလစ်စက်, etc
DX68 အီးတီယာရင် Loader ရေပိုက် crimping စက်4"4S 380V 400V 240V
ကာဗွန်သံမဏိ NPT ဟိုက်ဒရောလစ်အမြန်ရေပိုက်နားချင်းဆက်မှီ
ရောင်းရန်2"YH51M ဟိုက်ဒရောလစ်ရေပိုက် swaging စက်
ဟိုက်ဒရောလစ်ရေပိုက် connector ကို / သံမဏိ fittings
မက်ထရစ်အမျိုးသမီး 24 ဒီဂရီ Cone အို-Ring ပြန်သုံးနိုင်သောဟိုက်ဒရောလစ်ရေပိုက် fittings
အနိမ့်သောစျေးနှုန်း! အီး 9sets အခမဲ့အမြန်ပြောင်းလဲမှု tool ကိုကွန်ကရစ်ပိုက် crimping စက်ကွယ်လွန်
© 2018 YH ဟိုက်ဒရောလစ်
မူပိုင်ခွင့်© Ningbo YH Hydraulic စက်စက်ရုံ | အရောင်းပြခန်း | ရွာေဖြလမ္းညႊန္